Karazan-latabatra am-pandriana 6 hanomezana ny efitrano fatoriana | Bezzia
Maria vazquez | 30/04/2021 18:00 | fanaka
Ny latabatra dia ampahany amin'ny vondrona fanaka izay heverinay fa ilaina ao amin'ny efitrano fandrian. Mpiara-miasa lehibe izy ireo hampitombo ny fahafahan'ny fitehirizana ao amin'ny efitrano fandriany ary tena ilaina izy ireo hanana ireo zavatra rehetra mety ilaintsika rehefa mandeha matory sy mifoha isika.
Inona avy ireo zavatra ampiasainao alohan'ny hatory sy rehefa mifoha? Inona ireo zavatra hafa ankoatra ireo izay tianao ho voarindra eo amin'ny faran'ny alina? Halalino ireo zavatra ilainao, fantaro izay fomba fanao amin'ny takelaka tsara indrindra mifanaraka amin'ny hatsaran'ny efitra fatorianao ary safidio izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao indrindra.
2 Nahazo aingam-panahy i Nordic
3 Fomba mahazatra sy be pitsiny
4 AN'NY TAOZAVA-BAVENTY
Safidin-tsambo mitsingevana no safidy tsara hafa handravahana toerana kely. Rehefa tsy dia manam-potoana be amin'ny lafiny roa amin'ny farafara ianao na tsy te-hamerina hameno ny efitrano amin'ny fanaka be dia be, dia lasa mpiray tsikombakomba amin'ny antony maro samihafa ireto:
Mazava izy ireo. Mampitombo ny fahatsapana fahalalahana ao amin'ny efitrano nametrahana azy ireo izy ireo.
Maka toerana kely izy ireo. Ny haben'ny maodely mitsingevana indrindra dia hamela anao hametraka azy ireo amin'ny toerana kely izay tsy misy toerana misy ny latabatra mahazatra.
Avelany diovina tsara ny gorodona. Miorina amin'ny rindrina izy ireo izay manakana azy ireo tsy hihetsika. Na izany aza, rehefa avo toerana izy ireo dia manamora ny fanadiovana ny efitrano isan'andro.
Tena haingon-trano izy ireo. Amin'ny fivoahana amin'ireo latabatra nentim-paharazana, manome ny efitrano fikitika tany am-boalohany izy ireo.
Ny latabatra hazo mitsingevana no malaza indrindra ankehitriny handravaka ny efitrano fandriany noho ny hafanana entin'izy ireo. Na dia miaraka amin'ireo endrika kely indrindra amin'ny feo maivana: fotsy, menaka, volondavenona… miditra an-tsehatra afovoan'ny efitrano fatoriana misy hatsarana maoderina. Azonao atao ny mahita azy ireo amin'ny vatasarihana iray na roa hampitomboana ny fahafahany mitahiry sy / na miaraka amin'ny hazavana natsangana mba tsy hisian'ny fametrahana jiro eo amboniny.
Nahazo aingam-panahy i Nordic
El fomba nordika Nanjary marika farany amin'ny famolavolana anatiny ny tao anatin'ny folo taona lasa. Manambatra hazo voajanahary amin'ny antsipiriany fotsy, ny latabatr'ity fomba ity dia mitondra hazavana sy hafanana amin'ny efitrano fandriana misy fomba samy hafa. Amin'ny tongotra efatra, matetika izy ireo dia manana vatasarihana iray na roa ahafahanao manana ny ilaina eo akaikin'ny fandriana.
Fomba mahazatra sy be pitsiny
Ny fahamendrehana sy ny fahamaizana dia mamaritra ny fomban'ny efitrano fatorianao? Raha izany dia hifanaraka tsara aminy ireo lafin-alina ireo. Ireo izay mitambatra a fotsy mamirapiratra misy singa volamena Izy ireo no malaza indrindra amin'ny fanaingoana ny efitrano fandriana misy rindrina fotsy, valindrihana avo misy haingo ary varavarankely lehibe.
Latabatra kely nataon'i Made sy Ikea Fikasihana maoderina kokoa, na izany aza, dia hanome ny efitrano fatoriana ny endrika loko mainty endrika mahitsy sy fomba minimalista. Sahy miloko ve ianao? Ny endrika mampifangaro endrika, tsipika ary tsipika, toa an'i Made's, dia hanome ny efitrano fatorianao mandanjalanja eo amin'ny mahazatra sy ny maoderina.
Latabatra am-pandriana amin'ny endrika indostrialy amin'ny ankapobeny dia manana rafitra metaly. Ny sasany dia entanin'ny aingam-baravaran'ireo lokom-by ireo izay nampiasaina taloha tany amin'ny indostria, hopitaly na oniversite, na dia havaozina amin'ny endrika sy loko miloko kokoa aza izy ireo.
1. Savoi-Kave Home, 2.Bavi-Sklum, 3. Trixie-Kave Home, 4.Nikkeby-Ikea, 5.Kluis-Miv Interiors Matetika ihany koa ny mahita endrika izay atamban'izy ireo amin'ny vy ny vy mba hahatratrarana endrika mafana kokoa. Arakaraky ny maha voajanahary sy marokoroko ireto fitaovana ireto no mampitombo ny fomba indostrialy ny fanaka. Arakaraky ny maha-homogenezy sy voapoizina azy ireo no maha akaiky azy ireo ny hatsarana maoderina iray.
Mba hanomezana tantaram-pitiavana ny efitrano fatorianao dia tsy hahita mpiara-miasa tsaratsara kokoa ianao noho ireo takelaka alina izay toa vao avy nivoaka avy tao amin'ny tafon-tranon'ny renibenao ianao. Ny famolavolana tongony mihodina, tsipika miolakolaka ary fisaka fotsy nesorina dia safidy tsara, na dia tsy manilika an'ireo miaraka aminy aza izahay harato tontonana na cannage.
Tsy dia manana ny lazany toa ny zoron'ny alina izy ireo ary tsy mino izahay fa tsy hanana izany mihitsy, saingy safidy malaza be izy ireo. Amin'ny ankapobeny vita amin'ny hazo lacquered amin'ny satin tone na miaraka amin'ny glitter, manana hery haingo lehibe izy ireo.
1. Trano Kurb-Kave, 2. Odie-Made, 3. Cairn-Made, 4. Babel 02-Sklum
Maivana kokoa amin'ny fahitana, Izy ireo dia afaka manome antsika vatasarihana telo mitahiry zavatra. Na izany aza, ireo dia mety tsy ho azo ampiharina toa an'ireo manana endrika toradroa. Fa maninona Satria sarotra kokoa izy io, raha jerena ny endriny, ny manararaotra ny toerana fitahirizana omen'izy ireo antsika.
Inona no karazana takelaka alina nofidinao hanomezana ny efitranonao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » fanaka » Karazan-latabatra eo am-pandriana 6 hamelana ny efitrano fatoriana